အမေတစ်ယောက်က မွေးကင်းစကလေးငယ်ထက် နှစ်ဆနီးပါးအလေးချိန်ရှိတဲ့ ကလေးမွေးဖွားခဲ့ » Today Bago
HomeGeneral KnowledgeUnique Thingsအမေတစ်ယောက်က မွေးကင်းစကလေးငယ်ထက် နှစ်ဆနီးပါးအလေးချိန်ရှိတဲ့ ကလေးမွေးဖွားခဲ့ အမေတစ်ယောက်က မွေးကင်းစကလေးငယ်ထက် နှစ်ဆနီးပါးအလေးချိန်ရှိတဲ့ ကလေးမွေးဖွားခဲ့ June 9, 20170comments Nandar Lwin Posted in Unique Things0မေလ15ရက်နေ့က မိခင်ဖြစ်သူ Chrissy Corbittက သမီးလေး Carleigh ကိုမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ မွေးပြီးပြီးချင်း ပေါင်ချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်တောင် မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးက 13ပေါင်နဲ့ 5အောင်စ (6ကီလိုဂရမ်) အလေးချိန်ရှိတာကြောင့် ပျမ်းမျှ မွေးကင်းစကလေးငယ်ထက် နှစ်ဆနီးပါးအလေးချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
သူမက ၆လအရွယ်ကလေးငယ်နဲ့ တူတယ်လို့ Larry Corbitt ကဆိုပါတယ်။ သူမရဲ့ သေးခံအ၀တ်က size3 မှရပြီး ၉လသားအရွယ်အကျီ င်္နဲ့မှတော်ပါတယ်။ သူတို့သမီးလေးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကို ကျင်းပဖို့ မိဘတွေဖြစ်တဲ့ Larry နှင့် Chrissyက ဓါတ်ပုံဆရာနဲ့အတူ ဓါတ်ပုံများရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာ ဗီဒီယိုထဲမှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Related Posts0comments Unique Things အမလေး ! သူ့အစား အသည်းယားလိုက်တာနော်
0 comments International NewsUnique Things ၁၄နှစ်အရွယ်ကောင်မလေး မျက်တောင်ကော့ဖို့ ကြိုးစားရင်း အိမ်မီးလောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်
0 comments UncategorizedUnique Things အမလေး အသည်းယားစရာ ! သူ့လို စကေးနဲ့ သွားလုပ်လို့ကတော့ ရူးတောင်သွားဦးမယ်
လက်ရှိနည်းပြ ရှိတ်စပီးယားကို လက်စတာအသင်း အမြဲတမ်းန...	June 9, 2017	0 comments မြောက်ဦးတွင် ရှေးဟောင်းဘုရား ၄ ဆူ တွေ့ရှိ	June 9, 2017	0 comments Share this 8SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr
About author Nandar Lwin
0 comments Unique Things ထူးထူးခြားခြား ကင်းမြီးကောက်နဲ့အလှပြခဲ့တဲ့ ထိုင်းအလှမယ်
Do not miss0comments Unique Things အမလေး ! သူ့အစား အသည်းယားလိုက်တာနော်
Today Bago is leading website of Myanmar to bringing knowledge and daily updated international news for youth.
Posts0comments Lifestyle ငှက်ပျောသီး ပန်ကိတ်ပြုလုပ်နည်း
June 26, 20170comments Most commented ငှက်ပျောသီး ပန်ကိတ်ပြုလုပ်နည်း
June 26, 20170comments မေယုတောင်ကြောပေါ် အကြမ်းဖက်သင်တန်းစခန်းများ တွေ့ရှိ...
June 26, 20170comments ဒုတိယကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရပြီဖြစ်တဲ့ ဂျွန်ဂျီဟွန်
June 26, 20170comments Our Facebook Page
Copyright © 2015 Myanmar Today Bago Disable responsivity Gotahot tip? Send it to us!	Your Name (required)
CLOSE Gotahot tip? Send it to us!	Your Name (required)